यति राम्रा दुई छोराका बुवा हुन्- शिशिर भण्डारी ! ८ बर्षअघि प्रेम बिवाह गरेको खुलाशा (भिडियो हेर्नुस) – PathivaraOnline
Home > समाचार > यति राम्रा दुई छोराका बुवा हुन्- शिशिर भण्डारी ! ८ बर्षअघि प्रेम बिवाह गरेको खुलाशा (भिडियो हेर्नुस)
काठमाडौं-निकै चर्चित कार्यक्रम प्रस्तोता तथा कलाकार शिशिर भण्डारीले आफ्नो जीवनका केहि रहस्यहरु खोलेका छन् । स्टार न्युज नेपालका रबिन पौडेलसँग कुरा गर्दै शिशिरले आफु बिवाहित भएको बताएका छन् । त्यसो त शिशिरले यो कुरा अघिल्ला अन्तर्वार्ताहरुमा पनि भनेका हुन् । यद्यपी उनी बिवाहित हुन् भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा छैन ।
धादिँगका शिशिरले आफु बिज्ञान बिषय पढ्न काठमाडौं आएको, सानैदेखि गायनमा रुचि भएकोदेखि बिवाहित मात्रै हैन आफ्ना २ छोराहरु रहेको पनि बताएका छन् । असिम र अनुरोध नामका शिशिरका दुई छोराहरु छन् ।
राम्रो कलाकार, क्यारिकेचर मास्टरसँगै उनी गायक पनि हुन् । आफ्ना एक गीतलाइ उने धेरै गायकहरुको आवाजमा पनि गाए । जीवनका अन्य रोचक पाटोहरुलाई खोल्दै शिशिरले आफु अहिले पनिसँघर्ष गरिरहेको बताए । उनल आफुले काठमाडौंमा बाँच्नका लागि कति दिन भोकै रहेको पनि खुलाए..भिडियो हेनुस
बाबु बेपत्ता, लालनपालन गर्ने आमाकाे निधन भएपछि छोराछोरीको यस्तो बिचल्ली!